विराटनगर विमानस्थलमा बाढी, जहाजनै डुबानमा (हेर्नुहोस् ६ तस्बिरमा) - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
विराटनगर विमानस्थलमा बाढी, जहाजनै डुबानमा (हेर्नुहोस् ६ तस्बिरमा)
मोरङ । विराटनगरमा ०४५ सालपछिको ठूलो पानी परेको छ । भीषण वर्षाका कारण अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । विराटनगर बिमानस्थल पनि बाढीका कारण डुबानमा परेकाे छ । डुबानकै कारण शनिबार बिहानैदेखी कुनै अान्तरीक उडानहरू हुन सकेकाे छैन ।
त्यसैगरी बाढीले विद्युत लगायत टेलिकम र खानेपानीमा समेत क्षती पूर्याएको कारण सबै सेवा ठप्प बनेको छ । बिराटनगर विमानस्थल यतिबेला जलाशयले भरिएको छ । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्छ, यो विमानस्थल नभएर पानीजहाज रोकिने बन्दरगाह हो ।
डुबानका कारण यसरी विमानस्थल नै डुबेको सम्भवतः नेपालकै यो पहिलो घटना हो । दुई दिनयता बिराटनगर विमानस्थलको सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएको छ । जहाजका पाङ्ग्राहरु डुबेको अवस्थामा देखिएको श्री एयरलाइन्सको यो विमानचाहिँ दुई दिनअघि परीक्षण उडानका क्रममा काठमाडौंबाट बिराटनगर पुगेको थियो ।
काठमाडौं ल्याइएपछि डाक्टर गोविन्द केसीले यसो भने…
बन्द गरेर बिरामीको जीवनसँग खेलवाड गर्न नहुने भन्दै डा. श्रेष्ठले गरिन विरोध
डा. गोविन्द केसीलाई आजै काठमाडौं ल्याउने नेकपाको तयारी
१४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय बन्ने, यस्ता छन् सरकारका निर्णय